Volver a Verde 2 -Tropical Loft, ichibi & ithala - I-Airbnb
Volver a Verde 2 -Tropical Loft, ichibi & ithala
Mérida, Yucatán, i-Mexico
Igumbi e-ifulethi eliyihhotela ibungazwe ngu-Eduardo
I-Loft Enhle enkingeni entsha esondelene yamakamelo ama-4 kuphela ahlukile, anomklamo omuhle wesitayela seTropical / Mid Century Modern, emhlophe inekhishi lemishini ephelele, indawo yokudlela ye-chic kanye ne-cenote enhle njengegumbi lokugezela. Ithala elihle le-retro chic eliphambi kwechibi elikhulu eliqabulayo elizungezwe ingadi yasezindaweni ezishisayo lihambisana nesimo sezulu saseTropical lapho le ndlu evamile yama-yucatecan yama-80s yashintshwa ukuze ibe indawo ekahle yokujabulela isimo sezulu sasehlobo saphakade saseYucatan.
Igumbi lesitayela se-Loft linendawo yokulala ebheke ingadi encane yangaphakathi eshisayo, umbhede wosayizi wendlovukazi onethezekile, ikhabethe, ideski kanye ne-TV yesikrini esiyisicaba ene-Netflix etholakalayo, ikhishi eliphelele elinakho konke okudingayo ukuze udle futhi upheke, igumbi lokugezela elihle neliphathekayo elinomklamo ophefumulelwe. ngezindawo zaseYucatan..
4.72 out of 5 stars from 225 reviews
4.72 · 225 okushiwo abanye
Indawo yokulala ayikho phakathi nendawo kodwa inendawo ekahle endaweni emaphakathi phakathi kwesikhungo esinomlando, egcwele umlando, iminyuziyamu, izindawo zokudlela, amabha kanye nezindawo ongazivakashela, uzibone futhi uzijabulele; kanye nezindawo ezintsha zezohwebo nezinkonzo zedolobha ezinenxanxathela yezitolo ezintsha nezamanje (i-Plaza Altabrisa), izindawo zokudlela, izibhedlela (Isibhedlela Esikhethekile Esiphezulu, Isibhedlela i-Star Medica), njll.
Okunye okuphawulekayo ukuthi imigwaqo emi-2 kuphela kude kunendawo yokuthenga enemakethe enkulu, amabhange ahlukahlukene, indawo yokubhaka, izitolo zika-ayisikhilimu, izitolo, njll.
Ukunakwa ngo-11am kuya ku-5pm ukwamukela nokusiza kunoma yisiphi isidingo izivakashi ezingaba naso, futhi ngaphandle kwaleso sikhathi zingasithinta futhi siyatholakala ukuze sizisekele uma zisidinga.
Hlola ezinye izinketho ezise- Mérida namaphethelo